Hälsobesök vid 3 år - teambesök med läkare och sjuksköterska - somaliska
3 sano – booqasha kooxda isku jirta kalkaalisada caafimaadka iyo dhakhtarka
Hälsobesök vid 3 år - teambesök med läkare och sjuksköterska - somaliskaThe content concerns Västra Götaland
Booqashada marka uu ilmuhu jiro 3 sanno waxaa lala kulmi doonaa koox ka kooban kal-kaalisada caafimaadka ee ka shaqeysa rugta daryeelka caafimaadka dhalaanka (BVH) iyo dhakhtarka labadaba. waxaa kulanka booqashada aan kaga hadli doonaa arimo khuseeya xaalada caafimaad ee ilmaha iyo koritaankiisa.
Waxaa jira fursad lagaga hadli karo waxyaabo ay ka mid yihiin macnaha i waalid la noqdo, nolol maalmeedka qoyska, sida uu yahay ilmuhu muddada uu ku suganyahay dugsiga xanaanada carruurta cuntada ilmaha iyo nabdgalyada ilmaha. Waxaa haboon in aad ka fikirto waxyaabaha aad u aragto in ay muhiim yihiin ee aad rabto in aad kala hadasho kalkaalisda caafimaadka iyo dhakhtarka. Waxaa caadi ah in laga hadlo cuntooyinka uu ilmuhu cuno, sida uu yahay jawiga marka qoysku wada cunteynato wakhtiyda cuntada, ciyaarta iyo in la wada jiro. Waxaa haboon in la abuuro caadooyinka la xidhiidh cuntada iyo dhaqdhaqaaqa wakhti hore maadaama ay saameyn ku yeelan doonto xaalada caafimaad ee ilmaha ee noolashiisa oo dhan. Sidoo kale waa la miisaami doonaa isla markaana waxaa la cabiri doonoo dhererka ilmaha. Mararka qaarkood Waxaa la tix raacaa koboca hadalka iyo luqada ilmaha.
Ku soo dhawoow kulanka mcaafimaadka marka ilmuhu jiro 3 sano ee ka dhici doona rugta daryeelka caafimaadka!
Hadda waxa aad ogaan doontaa waxyaabaha dhici doona muddada lagu gudo jiro booqashada aad ku timid rugta daryeelka caafimaadka BVC, marka aad jirto saddex sano. Waxaa aad muddo yar oo kooban aad ka hadli doontaa xaaladaada caafimaad iyo waxyaabaha aad jeceshahey in aad sameyso. Maxaad jeceshahay in aad ciyaarto?
Waxaa aad la kulmi doontaa kalkaaliso caafimaad iyo dhakhtar. Waad wada hadli doona isla markaan waad wada ciyaari doontaan.
Waxaa aad la kulmi doontaan kalkaaliso caafimaad iyo dhakhtar, kuwaas oo fiirin doona sida uu ilmuhu kobcayo, sida uu u hadlayo iyo sida uu wax u fahmayo.
Waan wada hadli doonaa
Muddo yar kooban baad ka wada hadli doontaa arimo ku saabsan xaaladaada caafimaad iyo waxyaabaha aad jeceshahey in aad sameyso.
Waxaa la miisaami doonaa ilmaha isaga oo xidhan kalsoonka.
Kalkaalisada caafimaadka waxaa ay miisaami doonaa culeyska jidhka ee ilmaha isla markaana waxaa la cabari doonaa dhereka ilmaha si loo arko sida uu yahaya koritaanka ilmuhu. Ilmaha waxaa la baadhi doonaa isaga oo xidhan kalsoonka kaliya.
Dhakhtarka ayaa baadhi doona ilmaha
Mararka qaarkood kalkaalisada caafimaadka iyo dhakhtarku waxaa ay kugu sameeyn doonaan baadhitaan dheeri ah si ay u ogaadaan xaaladaada caafimaad. Waxaa laga yaabaa i dhakhtarku dhakhtarku dhageyso garaaca wadnahaaga, sidoo kale waxaa uu baadhitaan ku sameyn doonaa jidhkaaga intiisa kale.
In baadhitaan lagu sameeyo jidhka waa qayb ka mid ah baadhitaanka caafimaadka. Baadhitaanka uu dhaktarku sameynayo waxaa uu ku saleysnaan doonaa baahida uu qabo ilmuhu.
Ka hor inta ayaan is nabad galyeyn, wax yar baan wada hadli doonaa.
Marka uu kulanka booqashadu dhamaado. Waxaa la idin siin doonaa balan kulanka soo socda markaas oo uu ilmuhu jiro 4 sano. Haddii aad dareento in aad u baahantahay isla markaana aad rabto waxaa aad qabsan kartaa balan kaas ka horeeya.
Halakan ka akhri macluaad dheeri ah oo ku saabsan (svenska)